IPad Pro 9,7-inch vaovao | Avy amin'ny mac aho
Vao nampiditra ny fitaovana voalohany amin'ity taona ity i Apple: ny iPhone SE sy ny iPad Pro 9,7-inch. Ity farany dia tsy nantsoina araka ny andrasantsika iPad Air 3 na iPad Mini Pro, na eo aza izany tena kinova kely nidina tamin'ny iPad Pro 12,9-inch izay natombok'i Apple tamin'ny faran'ny taona lasa.
Amin'io fehezan-teny io ihany dia afaka nahita isa, isa maro ary fehy nylon vaovao ho an'ny Apple Watch izahay, saingy tsy nisy na inona na inona voalaza momba ny fanavaozana ny Macbook andrasana 12 santimetatra. Tsy hainay raha afaka andro vitsivitsy dia havaozina miaraka amin'ny modely vaovao ny tranokala na raha hiandry volana vitsivitsy isika.
Avy amin'ny zavatra hitantsika nandritra ny famelabelarana ny iPad Pro 9,7-inch vaovao mampifandray ilay processeur A9X mitovy amin'ny coprocessor M9 mihetsika, manohana ny Apple Pencil, manolotra vahaolana 2.048 x 1.536 ho antsika (ny iPad Pro 12,9-inch dia manana vahaolana 2.732 x 2.048), manana mpandahateny efatra, miorina amin'ny zoro efatra amin'ilay fitaovana ary, toy ny mahazatra, dia manome ora 10 ho antsika.
Toy izany koa, toa ilay zokilahy lahy, ny iPad Pro 9,7-inch dia hanolotra kitendry marani-tsaina koa izay hifandray amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny fifandraisana Smart Connect, izay manome azy io angovo ilaina amin'ny asany. Mikasika ny fakantsary, ny iPad Pro vaovao dia manana fakantsary 12 megapixel izay ahafahantsika manoratra horonantsary amin'ny 4k ary miadana miakatra hatramin'ny 240 frame isan-tsegondra, ho fanampin'ny sary mivantana malaza an'ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao. Amin'ny fakan'ny fakantsary dia mihoatra ny zokiny izay manome 8 megapixel vahaolana fotsiny haka sary.
Ny lanjan'ilay fitaovana dia 437 grama miaraka amin'ny hatevin'ny 0,61 cmraha ny iPad Pro 12 mirefy milanja 713 grama miaraka amin'ny hatevin'ny 0,69 cm.
1 IPad Pro Colors
2 Ny vidin'ny iPad Pro 9,7-inch
Toy ny mahazatra, ny iPad dia ho hita amin'ny loko mitovy amin'ny iPhone: Volondavenona, volamena, volamena ary volafotsy.
Ny vidin'ny iPad Pro 9,7-inch
iPad Pro Wifi 32GB: 679 euros
iPad Pro Wifi 128GB: 859 euros
iPad Pro Wifi 256GB: 1.039 euros
iPad Pro Wifi + Cellular 32 GB: 829 euros
iPad Pro Wifi + Cellular 128 GB: 1.009 euros
iPad Pro Wifi + Cellular 256 GB: 1.189 euros
Manomboka amin'ny 24 martsa ho avy izao dia afaka manomboka mitazona ity fitaovana ity ao amin'ny Apple Stores isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » IPad Pro 9,7-inch vaovao
Apple dia nanambara ny fandrosoana amin'ny ResearchKit